Home News Xog: Maxaa ka jira in Villa Soomaaliya Qorsheeyneeyso Waqti Kororsi Xildhibaan Cosoble...
Xog: Maxaa ka jira in Villa Soomaaliya Qorsheeyneeyso Waqti Kororsi Xildhibaan Cosoble oo Afka furtay!!
Hogaamiyaha xisbiga Ileys Xildhibaan C/qaadir Cosoble ayaaa ka hadlau damac qalafsan oo ay rabaan in ay mudo kororsi ku sameeystaan Kooxda Villa Soomaaliya,waxaana uu ka digay in aysan taas dhicin oo laga qabar-haayo.
Xildhibaan C/qaadir Cosoble ayaa waxaa uu sheegay in hada la qorsheeynaayo qaabkii dib loogu dhigi lahaa doorashada taasi oo hada laga sii shaqeeynaayo sida uu yiri Mudane Cosoble.
Waxaa uu soo hadal qaaday hadal uu jeediayay 2-bil ka hor Madaxweyne Farmaajo kaas oo aan ilaa iyo hada meelna lagasoo qaadin islamarkaana u ekaa afka uun.
Dhanka kale Hogaamiyaha xisbiga Ileys Xildhibaan C/qaadir Cosoble waxaa uu ku booriyay daneeyayaasha arrimaha Siyaasadda Soomaaliya in ay taas u toog hayaan.
Kooxda Nada iyo nolol oo aan laheeyn Xishood iyo gambasho ayaa waxaa laga yabaa in ay qaado talaabadaani oo la is oran karo waa tii dalka dib ugu celin laheed Colaad